Gas Chromatography-Mass Spectromety (GC-MS) 𝗚𝗖-𝗠𝗦 -
Gas Chromatography-Mass Spectromety (GC-MS)
𝗚𝗖-𝗠𝗦 ဆိုတာ 𝗚𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 နဲ 𝗠𝗮𝘀𝘀 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝘆 ဆိုတဲ့ မတူညီတဲ့ 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းထားတာပါ။ 𝗚𝗖 က 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 ထဲမှာရှိတဲ့ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝘀 များကိုခွဲထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 𝗚𝗖 ကထို 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘂𝗻𝗱 တွေဟာ ဘာ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မခွဲခြားနိုင်ပါ။ 𝗠𝗦 ကတော့ 𝗚𝗖 မှခွဲထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 များဟာ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန် အသေးစိတ် 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 များကိုပေးပါတယ်။
𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆?
မည်သည့်ခွဲထုတ်မှုကို 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 လို့ခေါ်တာလဲ။ 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 ခွဲထုတ်မှုတွင် တည်ငြိမ်ကဏ္ဍ (𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲) နှင့် ရွေ့လျားက (𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲) တို့ပါဝင်ပြီး ခွဲထုတ်လိုသော 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 များကို 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 ကိုဖြတ်လျှက် 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 ဖြင့်သယ်ဆောင်ကာ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 နှင့် 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 ကြားတွင် ခွဲထုတ်လိုသော 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 တို့ရဲ့ ရွေ့လျှားတဲ့နှုန်း (𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗮𝘁𝗲) မတူညီမှုပေါ်တွင် အခြေခံပြီး ခွဲထုတ်မှုကို ပြီးမြောက်စေတာပါ။
𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗼𝗳 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆
ထိုသို့ခွဲထုတ်ရာတွင် 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 ရဲ့ 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱 ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 ဖြစ်ခြင်းနဲ့ 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 ရဲ့ 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် 𝗴𝗮𝘀 ဖြစ်ခြင်းပေါ်မူတည်ပြီး 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 ရဲ့ အမည်သတ်မှတ်ချက်များ ကွဲပြားလာပါတော့တယ်။ဥပမာပြောရသော် 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 သည် 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱 ဖြစ်ပြီး 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 သည်𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 ဖြစ်ပါက 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱-𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 လို့ခေါ်ပါတယ်။𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 သည် 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱 ဖြစ်ပြီး 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 က 𝗴𝗮𝘀 ဖြစ်ပါက 𝗴𝗮𝘀-𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 ပါ။𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 သည် 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 ဖြစ်ပြီး 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 က 𝗴𝗮𝘀 ဖြစ်သော် 𝗴𝗮𝘀-𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 ပါ။ထိုအခြေအနေမျိုးအတွက် 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 ဖြစ်သည်ကို မဖော်ပြတော့ပဲ 𝗴𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 (𝗚𝗖) ဟုသာပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် 𝗴𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 လို့ပြောရင် 𝗴𝗮𝘀-𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 ဟုနားလည်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
𝗖𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗚𝗮𝘀 (𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲)
𝗚𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 တွင် 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗴𝗮𝘀 များက အစွမ်းမဲ့တဲ့ဓာတ်ငွေ့များပါ။ 𝗔𝗿𝗴𝗼𝗻 နှင့် 𝗡𝗶𝘁𝗿𝗼𝗴𝗲𝗻 ကဲ့သို့ 𝗴𝗮𝘀 များကိုသုံးနိုင်သော်လည်း 𝗛𝗲𝗹𝗶𝘂𝗺 𝗴𝗮𝘀 ကိုပိုပြီး အသုံးများပါတယ်။ ထို 𝗵𝗲𝗹𝗶𝘂𝗺 𝗴𝗮𝘀 ကို 𝗴𝗮𝘀 အိုးတွင်း 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 နဲ့ထည့်သွင်းထားပြီး ဓာတ်ငွေ့ထွက်နှုန်း (𝗳𝗹𝗼𝘄 𝗿𝗮𝘁𝗲) ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
𝗦𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗜𝗻𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺
𝗚𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵 ထဲကို 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 ထည့်သွင်းရာမှာ အလိုလျောက်ထိုးသွင်းသောစနစ် (𝗮𝘂𝘁𝗼𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲𝗿) ဖြင့်ထိုးသွင်းတာပါ။ ထိုစနစ်တွင် 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 ကို ဆေးထိုးပြွန်ကဲ့သို့ စနစ်ဖြင့်ကောက်ယူပြီး ထိုကောက်ယူမှုတွင် 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 အခု 𝟭𝟱𝟬 လောက်ထဲကမှ မိမိကောက်ယူလိုသော 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 တစ်ခုကိုကောက်ယူရန် 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿 မှ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮𝗻𝗱 ပေးနိုင်ပါတယ်။တစ်ကြိမ်ထိုးသွင်းမှုအတွက် 𝟬.𝟭 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗹𝗶𝘁𝗿𝗲 ပမာဏရှိတဲ့ သေးငယ်တဲ့ 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 ထုထည်ကို ထိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 𝗢𝘃𝗲𝗻
𝗚𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 တွင် 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 𝘁𝘆𝗽𝗲 အနေနဲ့ 𝗰𝗮𝗽𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝘆 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 နဲ့ 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗲𝗱 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗲𝗱 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 များဟာ အနည်းငယ်ရှေးကျတဲ့ 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပိုပြီးစွမ်းရည်မြင့်တဲ့ 𝗰𝗮𝗽𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝘆 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 များကိုအသုံးပြုလာပါတော့တယ်။ 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 အမျိုးအစားလိုက် 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 တို့ရဲ့ အရှည်ဟာ 𝟮𝗺 မှ 𝟲𝟬𝗺 အထက်ထိရှိကြပါတယ်။ 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 တစ်လျောက် အပူချိန်ညီမျှစေဖို့ 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 ကိုခွေထားပါတယ်။
𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲𝗿 ဖြင့်ကောက်ယူထားတဲ့ 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 ကို 𝗯𝗼𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 ရောက်တဲ့အထိ အပူပေးကာ 𝘃𝗮𝗽𝗼𝘂𝗿 ဖြစ်စေပါတယ်။ 𝗯𝗼𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 အလွန်မြင့်သော 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 များအတွက် 𝗴𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 လုပ်ဖို့ မသင့်လျော်ပါ။ အပူလွန်ကဲမှုက 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 ကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ 𝘃𝗮𝗽𝗼𝗿𝗶𝘇𝗲 ဖြစ်သွားသော 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 ကို 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗴𝗮𝘀 မှသင့်လျော်သော 𝗳𝗹𝗼𝘄 𝗿𝗮𝘁𝗲 ဖြင့် သယ်ဆောင်ကာ 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 ကိုဖြတ်သန်းပါတော့တယ်။ 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 အတွင်း 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 နှင့် 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗴𝗮𝘀 ဖြစ်သော 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗵𝗮𝘀𝗲 ကြားတွင် ခွဲထုတ်လိုသော 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 များရဲ့ 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗮𝘁𝗲 မတူတာကြောင့် 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 ထဲတွင်ပါသော ပါဝင်ဖက်များ ခွဲထုတ်ခြင်း ခံရပါတော့တယ်။
မတူညီသော 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 များသည ်𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 ကိုစဖြတ်သန်းချိန်မှ 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 ကိုရောက်ရန်ကြာချိန် မတူညီကြပေ။ ထိုကြာချိန်ကို သတ်ဆိုင်ရာ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 ရဲ့ 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 လို့ခေါ်ပါတယ်။
𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 ထဲတွင် 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 နှစ်မျိုးပါတယ်ဆိုပါစို့။ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 တစ်ခုသည် 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 ထဲစဝင်ချိန်မှ 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 သို့ရောက်ရန် 𝟯 𝗺𝗶𝗻 ကြာလျှင် ထို 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 ရဲ့ 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 သည် 𝟯 𝗺𝗶𝗻 ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက 𝟱 𝗺𝗶𝗻 ကြာလျှင် ထိုနောက်တစ်ခုရဲ့ 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 သည် 𝟱 𝗺𝗶𝗻 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 တွင် 𝗽𝗲𝗮𝗸 နှစ်ခုကိုတွေ့လျှင် 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 တွင် 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 နှစ်မျိုးပါတယ်လို့သိရပြီး ထို 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 တို့ရဲ့ 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 ကိုသိရမည်ဖြစ်သည်။
𝗽𝗲𝗮𝗸 တစ်ခုတည်းတွေ့လျှင် 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 သည် 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 တစ်ခုတည်းပါဝင်သော 𝗽𝘂𝗿𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ထိုသို့ 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻 ကိုဖြတ်သန်းပြီးသော် 𝗴𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော ခွဲထုတ်ခြင်းပြီးမြောက်သွားပါပြီ။ ခွဲထုတ်ပြီးသော 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 များကို မည်သည့် 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 ဖြစ်သည့်ကိုသတ်မှတ်ဖို့ 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝘆 ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါတော့သည်။
𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗰 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗚𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗰 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 နဲ့တွဲသုံးတဲ့ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာ (𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿) များဒါဇင်နှင့်ချီရှိနေပါတယ်။
ထို 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 တွေကတော့
(𝟭) 𝗙𝗹𝗮𝗺𝗲 𝗜𝗼𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿
(𝟮) 𝗧𝗵𝗲𝗿𝗺𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿
(𝟯) 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻 𝗖𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿
(𝟰) 𝗠𝗮𝘀𝘀 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿
(𝟱) 𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼𝗶𝗼𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿
(𝟲) 𝗙𝗼𝘂𝗿𝗶𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗜𝗥 (𝗙𝗧-𝗜𝗥) 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 စသည်များပါ။
ထို 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 များထဲမှ အစွမ်းအထက်ဆုံး 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 ကတော့ 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 ပါ။ 𝗚𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 နဲ့ 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 ကိုပေါင်းထားတာ 𝗚𝗖-𝗠𝗦 ပါ။𝗚𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 မှ ခွဲထုတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 ကိုအငွေ့အခြေအနေမှာတင် 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 ထဲမှ 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻 ထွက်စေပြီး 𝗶𝗼𝗻𝗶𝘇𝗲 လုပ်ပါတယ်။ 𝗶𝗼𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လုပ်နိုင်သော်လည်း 𝗵𝗶𝗴𝗵 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻 ဖြင့် 𝗺𝗼𝗲𝗰𝘂𝗹𝗲 ကိုရိုက်ခတ်ကာ 𝗶𝗼𝗻𝗶𝘇𝗲 လုပ်လေ့များပါတယ်။ ဒါကို 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗶𝗼𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 လို့ခေါ်ပါတယ်။ 𝗶𝗼𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ဖြစ်ဖို့ ရိုက်ခတ်ရသော 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻 ရဲ့ 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 ဟာ အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း 𝟳𝟬 𝗲𝗩 ဖြင့် 𝗶𝗼𝗻𝗶𝘇𝗲 လုပ်လေ့များပါတယ်။ 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻 𝗯𝗲𝗮𝗺 က 𝗺𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗲 ကိုရိုက်ခတ်သော် 𝗺𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗲 မှ 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻 တစ်လုံးထွက်စေပြီး 𝗺𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗲 ကို 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ဖြစ်စေပါတယ်။ 𝗺𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗲 မှ 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻 ဆုံးရှုံးမှုဟာ 𝗺𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗲 အတွင်းရှိ 𝗯𝗼𝗻𝗱 များကိုအားပျော့စေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် 𝗺𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗶𝗼𝗻 ဟာ 𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ၊ 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 ၊ 𝗻𝗲𝘂𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗲 နဲ့ 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗶𝗼𝗻 များအဖြစ် ပြတ်ထွက်ပါတော့တယ်။ ထိုထဲမှ 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 အပိုင်းတွေကို 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗲 နှစ်ခုဖြင့် အရှိန်ပေးကာ 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘇𝗲𝗿 𝘁𝘂𝗯𝗲 ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါတယ်။ 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 မဟုတ်သော အပိုင်းပြတ် (𝗳𝗿𝗮𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁) များကိုတော့ 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 ရဲ့ အပြင်သို့ 𝗽𝘂𝗺𝗽 နဲ့ စုပ်ပြီး ထုတ်ပယ်လိုက်ပါတော့တယ်။
𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘇𝗲𝗿 𝘁𝘂𝗯𝗲 ကိုအကွေးပုံသံလိုက်ကွင်းနဲ ဝန်းရံထားပြီး 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 တွေကို သုံလိုက်စက်ကွင်းဖြင့်လမ်းကြောင်းသွေဖယ်စေပါတော့တယ်။ ထိုသို့သွေဖယ်ရာတွင် 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 ငယ်တဲ့ 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 များက 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ကြီးတဲ့ 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 များထက်ပိုပြီး သွေဖယ်ခံရပါတယ်။ ထိုသွေဖယ်မှုအတိုင်းအဆမှ 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 တို့ရဲ့ 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 အချိုးကိုတွက်ချက်ပြီး 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 တို့ရဲ့ ပေါများဆ 𝗮𝗯𝘂𝗻𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 နဲ့ 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 ကို 𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵 ဆွဲပေးသော 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝘂𝗺 ကိုရရှိလာပါတော့တယ်။ ထို 𝗺𝗮𝘀𝘀 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝘂𝗺 မှ 𝗺𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝘄𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁 နဲ့ 𝗳𝗿𝗮𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁 တို့ရဲ့ 𝗺𝗮𝘀𝘀 များမှ မည်သည့် 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘂𝗻𝗱 ဖြစ်သည်ကို သတ်မှတ်ပါတော့သည်။
𝗖𝗿𝗱𝗗𝗥. 𝗭𝗔𝗪 𝗠𝗢𝗘 𝗢𝗢
Photometric Assay of Nucleic Acid by Multiskan sky Microplate Reader Hand-on Training
Public Health Laboratory at Mawlamyine
3500 Genetic Analyzer Maintenance [Calibration]…
Sequencing Troubleshooting at Yangon University
Real -time PCR and 3500…
Nano Drop One Spectrophotometer Demonstration…
PCR Demonstration at National Analytical…
11th Myanmar Pathologist Conference on…
Delta Science participated in “Conference…